China Ityhubhu yokuncamathela eshushu yabenzi beengubo zangaphantsi kunye nabathengisi I-H & H
Iteyiphu eshushu yokunyibilika kwesambatho sangaphantsi esingenamthungo
Ubukhulu / mm 0.03 / 0.05 / 0.075 / 0.1
Ububanzi / m / 1.52m njengoko wena
Indawo yokunyibilika 78-140 ℃
Umsebenzi wobugcisa Umatshini wokucinezela ubushushu: 1 70-180, 15-25s 0.4Mpa
Le mveliso yeyenkqubo ye-TPU. Yimodeli esele yenziwe iminyaka emininzi ukuhlangabezana nesicelo somthengi sokuthamba kunye neempawu zobungqina bamanzi. Okokugqibela iya kwimeko eqolileyo. ezilungele imimandla edityanisiweyo yangaphantsi engenamthungo, iibrashi, iikawusi kunye namalaphu e-elastic kunye neempawu zokuqina kunye namanzi Ukusetyenziswa kwempahla yangaphantsi engenamthungo, isetyenziswa ngokuqolileyo ukutywinwa komthungo kunye nesinqe. I-8mm, i-10mm, i-12mm, i-15mm bububanzi obuqhelekileyo obuhlala busetyenziswa ngabantu. Ngokwesiqhelo sivelisa imiqolo yehlathi yobubanzi obuyi-1.52m, kwaye sisike njengabathengi abafuna ububanzi.
1. Ukuziva kwesandla okuthambileyo: xa ifakwe kwisinxibo, imveliso iya kuba nokunxiba okuthambileyo kunye nokukhululekileyo.
2. Ukumelana nokuhlamba amanzi: xa imeko yokushisa okufudumeleyo, ayizokwaphuka kwaye ihlale iyimpawu zayo. Inokuthwala ngaphezulu kwamaxesha ali-15 ama-40 washing ukuhlanjwa kwamanzi.
5. Umsebenzi we-Elastic: Le mveliso isebenza kakuhle ngelaphu le-cotton-spandex.
I-LQ361T ifilimu yokunyibilikisa eshushu isetyenziswa ngokubanzi kwimpahla yangaphantsi engenamthungo kunye nezinye iimpahla ezingenamthungo ezithandwa kakhulu ngabathengi ngenxa yokuba ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba imvakalelo okanye ukuxabiseka kobuhle. Kananjalo ukwenzeka kwixesha elizayo ukusebenzisa ifilimu yokunyibilikisa eshushu yokutywina umthungo endaweni yokuthunga ngokwesiko.Ngokuba iipeyinti ezingenamthungo, imveliso yethu isetyenziswa ikakhulu ekuthungeni iipeyinti. Isinqe, sinayo i-spandex tape ehambelana nayo ukuze ilunge ngakumbi. Ngenxa yokunyibilika okuphezulu kunye nokusebenza kweqondo lobushushu, le tape yokunyibilikisa ishushu yenza ukuba imveliso yokugqibela ibe nokumelana nobushushu obungcono, kwaye umsebenzisi akazukulimaza okanye enze iglu inyibilike xa uhlamba ngamanzi ashushu. Esi sesona sicelo siphambili sale mveliso.
I-LQ361T ishushu ifilimu yokuncamathelisa eshushu, ngenxa yokuqina kwayo kunye nendawo yokunyibilika ephezulu, inokusetyenziswa kwezinye iimveliso ezinje ngeekawusi ezingenamthungo, iisuti zeyoga kunye nezinye iimpahla zelastiki.Abasebenzi basebenzisa umatshini weglue ukufaka iglu. Ukusebenza ngokukhawuleza kuyakhawuleza kwaye umphumo weglue ulungile Umsebenzi wephepha lokukhupha kukufumana indawo enokwenza ukuba inkqubo ibe lula. Xa kuthelekiswa netekhnoloji yendabuko, izibonelelo zale mveliso zicacile.
Egqithileyo I-TPU ishushu ifilimu yokuncamathela kwimpahla yangaphandle
Okulandelayo: I-EVA eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathelisa izihlangu
I-TPU ishushu inyibilika kwiphepha leglu le-insole
Ifilimu ye-web eshushu yokunyibilika eshushu